Vaovao - Dingana fitiliana fahadisoana amin'ny rafitra hydraulic milina famolavolana mandeha ho azy
Dingana Diagnostika diso amin'ny rafitra hydraulic an'ny milina famolavolana mandeha ho azy
Betsaka ny lesoka ao amin'ny rafitra hydraulic an'ny milina famolavolana mandeha ho azy. Ohatra, ny fandotoana solika dia mety hiteraka tsindry miasa, fikorianana na lalana mankany amin'ny tsy fahombiazan'ny rafitra fanaraha-maso ny hydraulic, ary hiteraka fahasarotana lehibe amin'ny famaritana ny lesoka hydraulic. Ny dingana manaraka dia ny fizarana ny dingana fitiliana aretina.
1. Fitsipika ankapobeny momba ny famaritana lesoka
Ny tsy fahombiazan'ny rafitra hydraulic amin'ny ankamaroan'ny milina famolavolana dia tsy tonga tampoka. Manana fampitandremana toy izany foana isika alohan'ny tsy fahombiazana. Raha tsy mihaino ity fampitandremana ity dia miteraka tsy fahombiazan'ny fepetra mandritra ny fizotry ny fampandrosoana. Ny antony mahatonga ny tsy fahombiazan'ny rafitra fanaraha-maso hydraulic dia betsaka fa tsy kisendrasendra. Mba hahafahana mamantatra haingana ny hadisoan'ny rafitra dia fantaro tsara ny toetrany sy ny lalànan'ny lesoka hydraulic.
2. Zahao ny tontolon'ny miasa sy ny fiainana ny rafitra fanaraha-maso hydraulic
Ny rafitra hydraulic an'ny masinina mamolaka dia mila miasa ara-dalàna, ary ny tontolon'ny asa sy ny toe-javatra iasana dia takiana amin'ny sehatra. Noho izany, eo am-piandohan'ny diagnostika ny lesoka dia tsy maintsy mitsara aloha isika ary mamaritra raha toa ka ara-dalàna ny fiasa sy ny fari-piainan'ny rafitra fanaraha-maso hydraulic sy ny olan'ny tontolo iainana amin'ireo firenena manodidina, ary manitsy avy hatrany ny tontolon'ny asa sy ny fianarana tsy mahay.
3. Fantaro ny faritra nitrangan'ilay lesoka
Rehefa mitsara ny toerana misy ny lesoka dia tokony hamaritana ireo lesoka mifandraika amin'izany amin'ny toe-javatra sy toetra mampiavaka azy, manenjana tsikelikely ny haben'ny hadisoana, manadihady ny antony mahatonga ny lesoka, mahita ny toerana manokana misy ny lesoka ary manatsotra ireo olana sarotra.
4. Mametraha firaketana an-tsoratra tsara
Ny Diagnostika diso dia mifototra amin'ny firaketana an-tsoratra sy ny fari-pahalalana momba ny famolavolana rafitra fampahalalana. Ny fametrahana ny firaketana ny firaketana ny rafitra dia fototra iray lehibe hisorohana, hahitana ary hikirakirana ny tsy fahombiazana. Ny fametrahana latabatra famakafakana momba ny olan'ny tsy fahombiazan'ny fitaovana dia afaka manampy ny orinasa hamaritra haingana ireo tranga tsy fahombiazana.
Sandbox, Milina Punch Out, Masinina bobongolo, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Famolavolana tavoahangy, Famolavolana koveta fanariana,